Shir jaraa’id Oo Hey’adaha UNka Uga Haldeen Barnaamijyadooda La Xiriira 2021 – Goobjoog News
Shir ay dhanka internet-ka ah ku yeesheen Hay’adaha kala duwan ee qaramada Midoobay, ayaa looga hadlay barnaamijyada sanadka cusub ee qaramada midoobay 2021.
Kulanka oo ay ka soo qeeyb galeen mas’uuliyiinta qeeybaha kala duwan UN ka ayaa ayaa lagu falan qeeyay qorshooyinka Amaanka , Gargaarka Bini aadanimada iyo howlaha horyaalo hay’adaha UN ka sanadka Cusub .
Ergayga Qaramada Midoobay u qaabil san arimaha soomaaliya James Swan, oo ka hadlay madasha ayaa soo hadal qaaday howlaha doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan.
Swan ayaa sheegay in saamileyda kala duwan ee Soomaalida looga baahan yahay in ay sameeyaan tanaasul , xalna laga gaaro arimaha doorashooyinka .
“Waxaa la joogaa xilligii hoggaanka xalkoodu noqon laha maslaxadda” ayuu yiri Ergayga gaarka ah ee qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha soomaaliya James Swan.
Doorashooyinka Soomaaliya ayaa in mudda ahba dib u dhac uga imaanayay khilaaf soo kala dhex galay mas’uuliyiinta dowladda iyo Maamulada qaar .
Dhanka kale Adam Abdelmoula, ku xeigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 5.9 milyan oo qof ku nool Soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo ah.
Sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray hadalkiisa ku xigeenka Xoghayaha guud ee qaramada Midoobay, in ay sii wadi doonan tageerada Dhaqaale, Bini aadanimo, Amni ay sii wadi doonan .
Kenya Oo War Ka Soo Saartay Go'aankii Guddiga Xaqiiqa Raadinta